2009 ခုနှစ် မတ်လ အတွင်းမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 665.4516 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပြီး မတ်လ 24၊ 25 ၊ 26 နဲ့ 27 ရက်တွေမှာ အမြင့်ဆုံး 690 ကျပ် ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ မတ်လ 3၊4နဲ့6ရက်တွေမှာ အနိမ့်ဆုံး 643 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
2009 ခုနှစ် မတ်လ အတွင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 1.52996 ပေါက်ခဲ့ပြီး မတ်လ2ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 1.55676 ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ မတ်လ 19 ရက်နေ့မှာ အနိမ့်ဆုံး 1.50636 ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
Thank you so much Mr Lu Aye for your Currency Review. Pls don't stop for future months.
my page :: grabbabuddy.com
hello there and thanks in your information - I
this site, since I experienced to reload the sitealot of occasions previous to I could get it to load properly.
slow loading circumstances instances will sometimes impact your placement in google and
Feel free to surf to my site :: monerjanala.com
Here is my web site: olo.ru
My site: www.szakibazis.com
Stop by my web page; kamsgraphics.com